ဘဝမှတ်တိုင်: မြန်မာဖောင့်လှလှ အသုံးပြုမယ်သူများအတွက် - Myanmar Love Font Version 1.0 APK (Root မလို)
မြန်မာဖောင့်လှလှ အသုံးပြုမယ်သူများအတွက် - Myanmar Love Font Version 1.0 APK (Root မလို)
မြန်မာဖောင့်အလှတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Myanmar Love Font ကို Apk ကိုရေးပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Samsung, Oppo နဲ့ Theme ပါတဲ့ Huawei EMUI တို့မှာလွယ်ကူစွာထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Root မလိုအပ်ပါဘူး။ စာလုံးပုံစံလန်း မလန်းကတော့ အောက်က ပုံထဲမှာကြည့်လိုက်ပါ။ မှုရင်းဖောင့်ရေးသားသူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အပြည့်အဝ Credit ပေးပါ၏။ App ရဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့3MB ကျော်ပဲရှိတယ်.
အသုံးပြုနည်းများ Samsung And Oppo အတွက်
အသုံးပြုနည်းကတော့ Myanmar Love Font Application ကိုဖုန်းမှာ install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ဖွင့်ပြီး Samsung ကို နှိပ်ပါ။ Install ကို နှိပ်ပြီး Myanmar Love Font (iFont) ကို install ပေးလိုက်ပါ။ Install လုပ်ပြီးသွားရင် Done ကို နှိပ်ပါ Application ထဲကို ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ Change Font ခလုပ်ကို နိုပ်လိုက်ပါ။
Font Style သို့မဟုတ် Fonts ထဲကို ဆက်ဝင်ပြီး Myanmar Love Font ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပြီ။
Huawei အတွက် အသုံးပြုနည်း
Huawei ဖုန်းတွေ အတွက်ကတော့ Application ကိုဖွင့်ပါ Huawei ထဲကို ဝင်ပါ။
Install ကို နှိပ်ပါပြီးရင် Change Font ကိုနှိပ်ပါ။ Me ကို ဝင်ပြီး Myanmar love Font ကိုရှာရွေးပြီး Apply လုပ်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်. ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 1/13/2017 06:16:00 am